जापानको सोनी कम्पनीले बनाएको यो रोबोट कुकुरले के के गर्न सक्दछ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानको सोनी कम्पनीले बनाएको यो रोबोट कुकुरले के के गर्न सक्दछ?
अंग्रेजी वर्ष २०१८ लाई “कुकुरको वर्ष” को रूपमा लिईएको थियो, र संयोगवश त्यो वर्ष सोनी कर्पोरेसनले उनीहरूको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट कुकुर, वा “आईबो” को नयाँ संस्करण निकालेको थियो। यस अगाडि सोनीले यो रोबोट कुकुरको नया संस्करण २००६ सालमा निकालेको थियो। आईबोलाई रोबोटिक्स बजारमा हालसम्म ल्याइएका सबैभन्दा परिष्कृत उत्पादको रुपमा लिईने गरिन्छ, तर यसको पछिल्लो संस्करण अझ बढी उन्नत हुने आशा गरिएको छ। यो नयाँ जापानी आविष्कार कस्तो छ त हेर्नुहोस्।
के हो त आईबो?
A post shared by aibo | Sony (@aibo_sony_official) on Nov 10, 2017 at 7:08pm PST
आईबो एउटा रोबोट पेट हो जसले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसको मद्दत लिन्छ। याको पहिलो संस्करण सोनीले १९९९मा निकालेको थियो। यो मोडेल लाई ERS ११० भनिएको थियो। त्यति बेला यो कुकुरको थोरै संख्या मात्र रिलिज गरिएको थियो। त्यसको उद्देस्य, ग्राहक संग संगै रहेर रोबटको भबिस्यको लागि चाहिने डाटा लिन थियो।
यो रोबोटको पहिलो संस्करण निकै सफल भएको थियो। दोश्रो संस्करण कम्पनीले २००० सालमा निकालेको थियो। यसलाई ERS २१० भनिएको थिईयो। यो पहिलो संस्करण भन्दा निकै परिस्कृत थियो। यसमा टच स्क्रिन, विशेष मोबिलिटी, LED र भोइस रिकग्निसन जस्ता फिचर थियो।
त्यो वर्ष पच्ची हरेक वर्ष आईबोको नया संस्करण आएको थियो। सन् २००६मा भने सोनी कम्पनीले आफ्नो ध्यान अरु कुरामा फोकस गर्नलाई आइबोको नया संस्करण निकाल्न छोडेको थियो।
१२ वर्ष पछि सोनीले नया आइबो निकाल्यो। यसलाई ERS १००० भनियो। यसको डेभेलपर नाओया माचुई हुन्। यो नया संस्करणमा अहिले सम्मकै राम्रो हिड डुल गर्न सक्ने क्षमता छ। यो यसमा भएको अल्ट्रा-कम्प्याक्ट एक्चुएटरले गर्दा सम्भब भएको हो। यसको आखामा भएको दुइटा OLED प्यानल आफ्नो हाउभाउ राम्रो संग प्रस्तुत गर्न सक्दछ। त्यसैगरी यसलाई आफ्नो मालिकली आफुले चाहेको अनुसारको ट्रेनिंग दिन सक्दछ।
आइबोको बेट्री २ घण्टा टिक्दछ अनि यसलाई पूर्ण रुपमा रिचार्ज हुन ३ घण्टा लाग्दछ। यसलाई चार्ज गर्नु पर्ने समय भएछी आफै भुक्न थाल्छ र खाना खुवाउनु भनेर कराउछ। त्यसपछि आफै गएर रिचार्ज गर्ने उपकरणमा बस्छ।
तथापि, यो रोबोटिक पाल्तु जनावरलाई पूर्ण रूपले काम गर्नको लागि इन्टरनेट जडान चाहिन्छ र यो LTE सिम कार्डको साथ आउँदछ। तपाईंले आफ्नो पाल्तु जनावरलाई “My aibo” भन्ने एप्पमा जडान गर्नुपर्नेछ र फोनको सेटिङ्गमा गई यसलाई अनुमति दिनु पर्दछ। त्यस्पस्चात कुकुरको क्यामेराबाट लिइएको फोटोहरू हेर्न र थप फिचर डाउनलोड गर्न मिल्नेछ।
आईबोको यो नयाँ अपस्केल संस्करणको मूल्य १९८००० येन छ। अन्तरक्रिया समर्थन गर्नको लागि २९८० येनको मासिक सदस्यता सेवा शुल्क पनि आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं पहिले तीन बर्षको सदस्यता शुल्क ९०,०००येन एकै चोटी भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।
आइबोको एक्लै रहेका मानिसहरुको लागि साथीको रुपमा रहन बनाइएको हो। यसलाई एक्लो जिबन बिताउने मानिसको लागि आत्मिय साथ् र मनोरंजन प्रदान गर्दछ। यो रोबोट असली जनावर जस्तै इमोसन र हाउभाउ देखाउन सक्षम हुन्छ। यदि हजुरलाई पेट चाइएको छ तर जीवित पेट पाल्दा आउने झन्झट चाइएको छैन भने आईबो उत्तम उपाय हो। त्यसैगरी असली जनावरको एलर्जी भएकालागि पनि यो असल रोजाई बन्न सक्दछ। यदि हजुरलाई आफ्नो आइबो किन्न मन छ भने यो आईबोको अनलाइन स्टोर(जापनिमा मात्र)बाट किन्न सक्नु हुनेछ।
यो जापानी रोबोट कुकुरको बिषयमा हजुरको धारणा के छ?
हजुरले ट्रेन वा बाटोमा स्कुल पढ्ने भुरा भुरीले बोक्ने गरेको चारपाटे परेको बलियो देखिने ब्याग पक्कै देख्नु भएको होला। जापानी स्कुलमा सबै कुरा युनिफर्म हुन्छ। ब्याग नि सबैले तोकिएको बोक्छन। यो ब्यागलाई जापानीमा रान्दोसेरु भनिन्छ। बच्चा पहिलो चोटी स्कुल जान थाले पछि यो ब्याग उनीहरुलाई अब तिमीहरु पढ्ने बेला सुरु भयो भन्ने सम्झना सरि दिईन्छ।…
जापानको JR ले २०१५ को अप्रिलमा संसारकै सबै भन्दा छिटो ट्रेन कुदाएर रेकोर्ड बनाएको थियो। यो ट्रेनलाई म्यग्लेभ ट्रेन भनिएको थियो। यसको परिक्षन गर्दाको गति ६०० किलोमिटर प्रति घण्टा थियो। अचम्मको कुरा यो ट्रेन ले भुइँ छुदैन। चुम्बकको साहयताले यो ट्रेन जमिन भन्दा केहि सेन्टिमिटर माथि रहेरै कुद्दछ। चिन र कोरियामा पनि जापानको भन्दा कम…
जापानमा नयाँ वर्षको छुट्टीहरू सामान्यतया डिसेम्बर २९ बाट सुरू हुन्छ र जनवरी ३ सम्म रहन्छ तर बर्ष र आआफ्नो कम्पनिको हिसाबको आधारमा यो डिसेम्बर २७ मा सुरु भइ जनवरी ८ सम्म जान सक्छ। यस समयमा मानिसहरू नयाँ वर्ष अघि ओसोजीको रीतिथितिमा घरहरू सफा गर्ने, ओसेची बनाउने र अन्य विशेष नयाँ वर्षको खाना किन्न, उनीहरू परिवार…
जब कुनै चीज बिग्रन्छ वा फुट्छ, के हजुर यसलाई तुरुन्तै फालिदिनुहुन्छ वा तपाईं यसलाई मर्मत गर्नु हुन्छ? जब बिग्रेको बस्तु हाम्रो मनपर्ने कुरा हो भने हामि सम्भवतः फुटेका ति चीजहरू मर्मत गर्छौं र त्यो कुनै घटनामा नपरेको जस्तो देखिने बनाउँदछौं। धेरै मानिसहरु टुक्रिएको वस्तुलाई नयाँको रूपमा राम्रो बनाउन ग्लू, माटो, वा अन्य मोल्डिंग उत्पादनहरू प्रयोग…
निण्टेण्डोले केस जितेपछि, के भयो मारीकार ? 2019-12-05